Jeneraly - Vaovao Gadget | Vaovao Gadget (Pejy 4)
Firy ny angona lanin'ny Spotify?
Azavainay hoe ohatrinona ny data angon'ny Spotify amin'ny taham-pahalalananao mba hahafantaranao ny fomba fitantanana rehefa mihaino ny mozika tianao indrindra ianao.
Fomba enina hanafahana toerana amin'ny iPhone
Ahoana no ahafahako manafaka ny toerana fitahirizana amin'ny iPhone-ko? Araho ity fampianarana tsotra ity ary fantaro ny fomba enina hitehirizana toerana ao anaty fahatsiarovana ny iPhone-nao.
Ahoana ny fomba handehanana amin'ny PDF mankany JPG
Ny fandehanana amin'ny PDF mankany JPG dia dingana tsotra be izay tsy mila fahalalana be loatra momba an'io lohahevitra io. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana azy.
Ahoana ny fananganana kaody QR
Raha nahasarika ny sainao foana ny kaody QR saingy tsy nila nanao iray ianao, dia atoro anao amin'ity lahatsoratra ity ny fomba famoronana kaody QR.
Tonga eto ny TheAwards 2018: loka ho an'ny fampiharana sy lalao tsara indrindra any Espana
PickASO sy TheTool dia nanangana ny fanontana TheAwards fanontana voalohany hanekena ny fampiharana finday sy lalao tsara indrindra any Espana.
Ahoana ny fametrahana Windows 10 amin'ny USB
Ny fametrahana Windows 10 avy amin'ny USB dia dingana tsotra iray izay antsipirihinay amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fanesorana ny Internet Explorer
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty mailaka
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty mailaka tsikelikely. Fantaro ny fomba hamoronana ny kaontinao amin'ireo mpamatsy mailaka lehibe.
iPhone XS Max sy Samsung Galaxy S9 mifanatrika, iza no tsara kokoa? [VIDEO]
Mijanona miaraka aminay ary jereo hoe aiza ny lafiny Samsung Galaxy Note 9 no tsara kokoa noho ny iPhone XS ary ny mifamadika amin'izany, ny tena mifanatrika mivantana.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary YouTube tsy misy programa
Raha te-hisintona misy horonantsary avy amin'ny YouTube dia tsy ilaina ny mampiasa rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo satria afaka manao izany amin'ny tranokalanay izahay
Ahoana ny fomba famolavolana iPhone ary avelao hivoaka avy ao anaty boaty
Ianaro ireo fomba samihafa hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone ary avelao eo ivelan'ny boaty fotsiny ity tutorial ity.
Ahoana ny fampiasana WhatsApp amin'ny solosainao
WhatsApp dia nanjary sehatra fifandraisana betsaka indrindra eran'izao tontolo izao, na ho an'ny tsara na ho an'ny ...
Ahoana ny fomba hijerena fisie miafina
Ny rafitra miasa rehetra, na inona na inona findainy, amin'ny console, amin'ny fahitalavitra mahay ...
Ahoana no fomba hamerenako ny Apple ID
Ambi Climate 2 dia mahatonga ny rivotra ivoaranao ho matanjaka sy salama kokoa, notsapainay izany
Mampiseho aminao ny Ambi Climate 2 izahay, fitaovana iray miaraka amin'ny Artigence Intelligence izay mahatonga ny rivotra ivoho anao ho hendry ary hamela anao hitsitsy herinaratra
Ahoana ny fanarenana sary voafafa amin'ny finday
Jereo ny fomba ahafahantsika mamerina sary izay nesorinay tsy nahy tamin'ny finday, na Android izany na iPhone.
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Mac
Raha mbola tsy fantatrao ny fomba mety rehetra atolotry ny macOS antsika rehefa maka pikantsary, amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia hamela ny fisalasalanao ianao.
Inona no atao hoe Chromecast?
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny torolàlana voafaritra ao amin'ny Chromecast sy izay rehetra azonao atao miaraka amin'ity fitaovana Google mahafinaritra ity.
Izahay dia mamakafaka ny Energy Tower 7 True Wireless avy amin'ny Energy Sistem, endrika tsara sy hery be dia be
Izahay dia eto an-tananay ny Energy Tower 7 True Wireless vaovao ary manome anao ny fandinihana feno indrindra ahafahanay mandanja ny fividianana anao.
Ahoana no hahalalana raha manana tapakilan'ny fifamoivoizana aho: fanontaniana, valiny ary tetika
Fantaro avy any an-trano sy an-tserasera raha manana tapakilan'ny fifamoivoizana ianao amin'ny fanarahana an'ity torolalana tsotra ity.
Mampianatra anao ny fomba fandefasana Mac izahay
ny fomba famolavolana Mac
iOS 12: inona ny fitaovana vaovao sy mifanentana, ny fomba fametrahana azy ary maro hafa
Ny kinova vaovao an'ny rafitry ny Apple miasa ho an'ny iPhone dia azo alaina ao. Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 12
Ahoana ny fanakatonana ny laharana finday
Ahoana no ahafahanao manakana nomeraon-telefaona. Jereo ny fomba hanakanana ny nomeraon-telefaona amin'ny Android na iPhone amin'ny fomba tsotra.
Matokia Fuseo, nandinika an'ity jiro ity izahay miaraka amin'ny seranan-tsambo tsy misy tariby Qi
Manana ny jiro Trust Fuseo izahay izay misy jiro LED izay misy charger tsy misy tariby Qi ary famahanana USB, mijanona ary tadiavo amin'ity famerenana ity.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny tambajotra 5g
Izany no antony tianay hanazava ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny tambajotra 5G, ny toetrany ary ny fomba hahazoana tombony betsaka avy amin'izy ireo.
Ahoana ny famindrana sary avy amin'ny iPhone mankany amin'ny solosainao
Ianaro ny fomba maka tahaka ny sary avy amin'ny iPhone mankany amin'ny solosainao mba hiarovana azy ireo ary handamina izany amin'ny fomba tsotra indrindra.
Fanadihadiana fiara mifehy radio 4 × 4 XinleHong 9125
Androany dia nosedrainay ny XinleHong 9125, fiara 4 × 4 mahery mifehy ny radio izay miavaka amin'ny fahafinaretana sy ny fampiasana azy…
iPhone Xs, iPhone Xs Max ary iPhone Xr, rehetra momba ireo fitaovana Apple vaovao
Ireo no fiasa, vidiny ary fisian'ny Apple iPhone Xs, iPhone Xs Max ary iPhone Xr vaovao. Izay rehetra tokony ho fantatrao.
Efa ofisialy ny Apple Watch Series 4: Fantaro ny vaovaon'izy ireo
Apple Watch Series 4: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Fantaro daholo ny momba ny famantaranandro vaovao an'ny Apple.
Inona ny Google Drive
Raha mbola tsy fantatrao hoe inona ny Google Drive, dia hasehontsika anao ato amin'ity lahatsoratra ity hoe inona izany, inona izany ho azy sy izay rehetra azonao atao miaraka aminy.
Araho ny fampisehoana mivantana ny iPhone vaovao ao amin'ny Actualidad Gadget
Rahampitso dia haseho amin'ny fomba ofisialy ny taranaka iPhone vaovao amin'ity taona ity, taranaka iray izay araka ny ankamaroan'ny tsaho, dia ho maodely miisa 3.
Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Youtube
Uten Moving Pro, fehin-tanana feno tanteraka amin'ny vidiny ambany
Uten Moving Pro fanatanjahan-tena famerenan-tànana marani-tsaina, fampisehoana lehibe amin'ny vidiny TOP. Mifanaraka amin'ny iOS & Android, ny antsipiriany rehetra eto
Ahoana no hahalalana raha nangalatra ny WiFi-ko
Mitadiava fomba isan-karazany hahitana raha misy olona mampiasa WiFi any an-trano na any am-piasana. Ahoana no hahalalana raha nangalatra ny WiFi anao.
Huawei dia manambara ny EMUI 9.0, ny fanavaozana lehibe indrindra amin'ny rafitra fiasa miorina amin'ny Android
Ny orinasa sinoa dia mbola eo amin'ny marika malaza eran'izao tontolo izao ary andro vitsy lasa izay dia nametraka an'i Apple tamin'ny faharoa ...
Ny GSMA dia manao ofisialy ny datin'ny MWC 2019
Toa tsy mampino ny hoe efa nandalo ny antsasaky ny taona 2018 isika fa raha misy zavatra tsy vitantsika ...
Meteor iray no namely ny International Space Station
Meteor iray no namely ny International Space Station, namaky ny tranony ary namorona lavaka kely nandosiran'ny rivotra rehetra.
Amazon Prime dia miakatra ny vidiny ary mizana hatramin'ny 36 € isan-taona
Raha manana na mieritreritra ny hahazo famandrihana ho an'ny Amazon Prime ianao dia tokony ho fantatrao fa nampiakatra ny taha izy ireo: tsy mandoa intsony 19,95 € isan-taona.
Ny Samsung Galaxy Tab S4 dia misy any Espana izao
Amin'izao fotoana izao, eny an-tsena no hany vahaolana matotra, na kalitao hiantsoana azy amin'ny fomba hafa, eo amin'ny tsenan'ny ...
Ny fomba tsotra indrindra handefasana horonan-tsary sy mozika avy amin'ny YouTube
Raha te-misintona horonan-tsary sy mozika amin'ny endrika MP4 na MP3 avy amin'ny YouTube ianao dia aza adino ity fampianarana ity, ny fomba mora indrindra anaovana azy.
Ahoana ny fanamarinana ny kaontinay Instagram
Ny fampandrenesana diso dia lasa iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ny tambajotra sosialy tato anatin'ny roa taona. Ary hoy aho tao anatin'izay roa taona lasa izay, raha namporisika ny hanamarina ny kaontinao Instagram ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny dingana rehetra hanarahana azy mba hahavitana izany haingana.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny doka Netflix eo anelanelan'ny toko
Farafaharatsiny mba ahafahantsika misoroka ny Netflix tsy haneho aminay ny doka eo anelanelan'ny toko, asehonay anao ny fomba anaovanao azy.
Ahoana ny fanamboarana ny fampirimana boaty Outlook Inbox
Fantaro ny fomba fanamboarana ny Inbox Outlook anao raha manokatra azy amin'ny hadisoana mifandraika amin'ny rakitra PST ianao amin'ny fitehirizana data.
Sonos Beam, lazainay aminao ny mampiavaka azy, ny vidiny ary mazava ho azy fa mandinika ny antsipiriany rehetra izahay mba hahitana ny antony mahatonga ny resaka be momba ity vokatra ity.
Ianaro ny fomba fizarana ny horonan-tsarinao avy amin'ny IGTV, ilay sehatra video feno Instagram lava, ao amin'ny pejy Facebook anao.
Fanadihadiana Star Wars Drones
Amin'ny maha-mpankafy ny saga Star Wars anao, ny fitsapana ireo drôna ireo dia niavaka. Tsia…
Sintomy ny saika misy an'ity horonan-tsary ity ho an'ny Chrome
Ianaro ny fomba fampidinana horonan-tsary avy amin'ny pejin-tranonkala rehetra mankany amin'ny solosainao noho ity fanitarana ity ho an'i Google Chrome.
WhatsApp sy Google dia manatevin-daharana ny hery, tsy handany ny backup
Google sy WhatsApp dia nanambara fifanekena iray izay hamela antsika hitahiry backup WhatsApp ao amin'ny Google Drive nefa tsy hipetraka eo amin'ny toerantsika.
Ahoana ny fampiasana Citypaq de Correos sy ny fomba ahazoana tombony betsaka amin'izany
Izahay dia manome torolalana kely ho anao hahafantaranao tsara ny fomba fiasan'ny Citypaq sy ny fomba hanararaotanay ny ankamaroany hanamora ny fiainantsika.
Efa manana daty lany daty ny fanitarana Firefox taloha
Ny fanombohana ny Firefox Quantum, ny fanitsiana lehibe farany an'ny mpitety Mozilla Foundation, dia nahatratra ny tsena tamin'ny taon-dasa, miaraka amin'ny The Mozilla Foundation, izay tompon'ny browser Firefox, dia vao avy namoaka fanambarana nanambara ny faran'ny datin'ny fanitarana taloha
Barcelona ary Granollers manokana indrindra, no toerana voafidy amin'ny My Store manaraka
Omaly tonga tao amin'ny firenentsika tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi 8 ary anio dia mahazo ny vaovao momba ...
Gmail for Android dia efa mamela antsika hanafoana ny fandefasana mailaka
Azo antoka fa efa nitranga tamin'ny iray taminao izany, alohan'ny hamakiana mailaka hijerena hoe voasoratra tsara izany ary nasehony ny rehetra na dia elaela aza ny fahitana azy, ary rehefa avy hita amin'ny Android, Gmail for Android dia mamela antsika hanafoana ny fandefasana mailaka efa nalefa
Ahoana ny fametrahana sy fitantanana lohahevitra ao amin'ny Google Chrome
Raha ny momba ny fanaingoana ireo mpizirantsika, Google Chrome dia saika ny hany mpitety tranonkala mamela antsika hanao izany, farafaharatsiny miaraka amin'ny loko hafa fa tsy ny fametrahana sy fitantanana lohahevitra ao amin'ny Google Chrome hanamboarana ny fitetezana anay dia dingana iray tena tsotra izay zahay eto ambany.
Ny vondrona eropeana dia maniry ny media sosialy hanala ny atiny mahery fihetsika ao anatin'ny adiny iray
Ny tambajotra sosialy sy ny fampiharana fandefasan-kafatra dia nanjary fomba tsara indrindra hifandraisana, tsy amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika ihany, fa ny Vondrona eropeana dia miasa amina drafitra iray hanery ny tranonkala rehetra hamafa ny atiny mahery fihetsika ao anatin'ny adiny iray latsaka ny famoahana azy.
Ahoana ny fandefasana ny eBooks anao amin'ny Kindle amin'ny alàlan'ny Telegram
Mianara fomba vaovao sy mora kokoa ary haingana kokoa handefasana ireo boky tianao indrindra amin'ny mpamaky Kindle anao, amin'ny alàlan'ny Telegram
Ny horonan-tsary sy andiany tsara indrindra hijerena ao amin'ny Netflix sy HBO amin'ity fahavaratra ity
Izahay dia manome anao andiana horonantsary tsara indrindra azonao jerena amin'ny mpamatsy atiny lehibe toy ny Netflix sy HBO.
Ahoana ny fomba famoronana Playlists miaraka amin'ireo hira efa nohenoinao indrindra tao amin'ny Spotify
Mamorona playlist miaraka amin'ireo hira sy mpanakanto efa nohenoinao tamin'ny fomba mora sy haingana tao amin'ny kaontinao Spotify.
Firy ny karazana HDR misy ary inona ny tsy fitoviana?
Misy karazana HDR isan-karazany, samy manana ny fahaizany nefa samy manana ny fotony, andao hojerentsika ny mahasamihafa azy ireo.
Mampitandrina i Mashable fa misy fanapahana marobe ny kaonty Instagram
Toa ny androany tolak'andro dia nafindra ho an'ny mpampiasa an-jatony ao amin'ny tambajotra sosialy Instagram malaza, ary ...
Ity teknolojia ity dia afaka mitahiry ny atin'ny ati-dohanao rehetra
Ity orinasa amerikana ity dia nilaza fa afaka mitahiry ny atin'ny ati-dohanao rehetra ary hitahiry izany mandritra ny an-jatony taona.
Manana fitaovana Samsung Galaxy ve ianao? Sintomy ny APK Fortnite
Fa mora toy izany ny ahafahanao misintona ny APK Fortnite ho an'ny telefaona Samsung Galaxy, raha mbola manana ny iray amin'ireo maodely mifanaraka aminao ianao.
Galaxy Watch sy Galaxy Home, atolotray anao ireo vokatra Samsung vaovao
Miaraka amin'ny Galaxy Watch dia mahita smartwatch misy famolavolana boribory isika, ary ny Galaxy Home, mpandahateny mahay miresaka HomePod, dia atolotra.
Ahoana ny fomba hahitanao ny kaonty WhatsApp mihantona
Ny sehatra fandefasan-kafatra WhatsApp no ​​nanjary fitaovana lehibe hampiasan'ny mpampiasa an-tapitrisany. Na eo aza ny lesoka izay ananantsika Raha hitanay ny nanakanana ny kaonty WhatsApp anay, na inona na inona antony, asehonay ato amin'ity lahatsoratra ity anao ny fomba ahafahantsika mamerina azy io mora foana.
Ireo no terminal azo havaozina amin'ny Android Pie manomboka izao
Holazainay aminao hoe iza ireo terminal izay efa azo havaozina amin'ny Android Pie ary iza amin'ireo no handray ny fanavaozana amin'ny herinandro ho avy.
Logitech dia mandefa charger tsy misy tariby miaraka amin'ny Apple
Amin'ity tranga ity dia nifandray tanana indray i Apple sy i Logitech, amin'ity indray mitoraka ity hanolotra charger tsy misy tariby miaraka amina endrika manokana
Ny Bose QC35II dia efa manana fanohanana an'i Alexa
Ny Bose QC35II dia efa manana fanohanana an'i Alexa. Fantaro bebe kokoa momba ireo headphones ireo izay afaka mampiasa ny mpanampy an'i Amazon izao
Android 9 Pie, mandroso amin'ny daty andrasana ary efa ofisialy izao
Ny loharanom-baovao sasany dia nametraka ny premiere ofisialy ity kinova ity amin'ny 29 aogositra ho avy, fa ny farany ...
Ny viriosy amin'ny solosaina ao amin'ny TSMC dia miteraka olana amin'ny famokarana Apple, NVIDIA na Qualcomm
Ny virus iray dia mahatonga ny TSMC hanana olana amin'ny famokarana puce. Fantaro bebe kokoa ny olan'ny mpamokatra vokarin'ny virus.
Ireto ny lalao PlayStation Plus sy Xbox Live Gold maimaim-poana amin'ny Aogositra 2018
Tonga ny fahavaratra, tafiditra ao amin'ny PlayStation Plus ny lalao maimaim-poana amin'ny volana Aogositra Mafia III sy ny filokana Xbox Live Gold amin'ny For Honor.
Ity no jiro LED LED vaovao, iray amin'izy ireo miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby
Azo antoka fa maro aminareo no manana charger ao an-trano ahafahanao mameno ny fitaovana elektronika miaraka amin'ny iray. Ny mpanamboatra kojakoja ho an'ny finday, Trust, dia nanolotra jiro vaovao roa, nifanaraka tamin'ny teknolojia farany.
Notsapainay ny jiro A60 sy Mini avy amin'ny orinasa Lifx
Izahay dia mitondra anao fandinihana ireo takamoa roa malaza indrindra avy amin'ny Lifx, iray amin'ireo orinasa fanaovan-jiro manan-danja indrindra.
Ahoana no hahalalana raha misy adiresy mailaka
Mialà amin'ny fisalasalana ary fantaro raha misy adiresy mailaka ao an-tsainao io fa tsy fantatrao raha marina izany.
Ahoana no hahalalana raha misy pejy web azo antoka
Ao amin'ny Actualidad Gadget dia lazainay aminao ny tetika ilaina hahalalana raha azo antoka ny pejy web iray.
Mampahafantatra anao ity lisitra ity raha mifanaraka amin'ny Fortnite ny telefaona Android anao
Atorinay anao ny lisitry ny fitaovana mifanaraka amin'ny Fortnite ho an'ny Android, aza hadino izany ary fantaro raha afaka mihazakazaka azy ny smartphone-nao.
Ity horonan-tsary ity dia mampiseho amintsika ny iPhone vaovao 2018 miasa
Ho an'ny herinandro voalohan'ny volana septambra, angamba ny herinandro faharoa farafaharatsiny, ny orinasa monina ao Cupertino dia hanolotra ny karazana iPhone vaovao, a Ity no mety ho endrik'ireo maodely iPhone 2018 vaovao raha voamarina ny tsaho mifandraika amin'ity fitaovana ity
Fortnite dia tsy ho ao amin'ny Google Play Store, ahoana no hametrahako azy?
Fortnite dia tsy ho hita ao amin'ny Google Play Store, asehonay anao ny fomba fametrahana Fortnite amin'ny Android hahafahanao milalao mora foana.
Safidy iray hafa handefasana mozika maimaim-poana
Misintona mozika avy amin'ny Internet amin'ny endrika Mp3 mora sy haingana amin'ny fanarahana an'ity fampianarana tsotra ity.
Ahoana no fomba hamafana mora foana ny hafatrao amin'ny Facebook rehetra
Raha te-hamafa ny làlan-dàlan'ny Facebook rehetra ianao dia araho ity fampianarana ity mba hianaranao ny fomba.
Izahay dia mamakafaka ny angovo Headphones 2 Bluetooth, headphone amin'ny vidiny lafo
Izahay dia manana ny fandalinana miaraka amin'ny antsipiriany sy ny toetran'ny Bluetooth Headphones 2 Bluetooth, jereo ity vokatra ity.
Ny telefaoninao, ny rindrambaiko hiditra amin'ny terminal Microsoft iOS na Android saika hidona amin'ny tsena
Tamin'ny fihaonambe farany natao ho an'ireo mpamorona Microsoft dia nanambara ny orinasa, ho fanampin'ny vaovao samihafa mikendry indrindra an'ity vondrona ity, ...
Nametraka lalàna vaovao i Google mba tsy hanafika ny ekosistem-telefaony
Tamin'ny taon-dasa, rehefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ireo maodely Pixel vaovao ny orinasan-tserasera Mountain View, dia nanesoeso azy ireo ilay olo-malaza. tranga manaraka.
Huawei dia mihoatra an'i Apple ary lasa mpanamboatra faharoa izay mivarotra finday avo lenta indrindra manerantany
Ny orinasa aziatika Huawei, dia namoaka ny valiny ara-bola tamin'ny telovolana faharoa amin'ny taona ankehitriny, a ...
Mampivelatra rindrambaiko afaka mahafantatra izay eritreretinao izy ireo
Vondronà mpikaroka iray ao amin'ny Kamitani Lab ao amin'ny Oniversiten'i Kyoto no nahavita namorona rindrambaiko afaka mahalala izay eritreretinao.
PLC sa WiFi repeater? Ny fahasamihafana ary iza no mety aminao mifanaraka amin'ny tranga misy anao
Izahay dia hanazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny PLC sy ny mpamerina WiFi, ka ho fantatrao hoe iza amin'ireo no tokony hampiasainao isaky ny mandeha.
Aza adino ny antsipiriany momba ny baolina kitra Tompondakan'ny Tompondakan'ny Tompon-daka Iraisam-pirenena 2018 amin'ny solosainao sy ny fitaovana findainao
WhatsApp dia nanjary sehatra fandefasan-kafatra lehibe indrindra eran-tany, noho ny ampahany tamin'ny zava-misy fa ...
Taorian'ilay olana nanjo azy ireo tamin'ny magazay Zaragoza tany am-piandohana ary nahemotr'izy ireo ny fisokafana hatramin'ny farany ...
Ireo gadget Aukey tsara indrindra izay tsy azonao adino amin'ity fahavaratra ity
Avy amin'ny tanan'i Aukey izahay te-hitondra lisitra vokatra tsara sy gadget izay tsy azonao adino amin'ity fahavaratra ity mba handraisan-tsoa ny fialantsasatrao.
Voahosotra ho mpitarika amin'ny varotra PC any Espana i HP
HP no mitarika ny fivarotana solosaina any Espana. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra PC amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity any Espana.
Ny tranokala YouTube dia efa mamela anao hahita horonantsary mitsivalana tsy misy dian-kapoka
Betsaka ny mpampiasa mandrakitra horonantsary mijidina, na eo aza ny endrika tsy mety indrindra amin'ny ...
Notsapainay ny vaovao iLife A7, mpanadio banga robot vaovao avy amin'ny orinasa sinoa izy io
Eo am-pelatanantsika ny iLife A7, maodely vaovao avy amin'ny orinasa sinoa izay mampanantena fizakan-tena, zava-baovao ary endrika tena tsara.
Ahoana ny fanafoanana maharitra ny kaontinao Amazon
Ianaro ny fomba hamafana maharitra ny kaonty Amazon ho soa.
Ahoana ny fomba hanafenana ny fifandraisana amin'ny Instagram mba tsy ho hitan'izy ireo amin'ny Internet aho
Ao amin'ny Actualidad Gadget dia miverina miaraka amin'ny fampianarana izahay, mampianatra anao ny fomba hanafenana ny fifandraisana amin'ny Instagram izahay mba tsy hahitan'izy ireo ahy an-tserasera.
Cloud Music Player: Milalao mozika maimaimpoana amin'ny iPhone amin'ny rahona
Cloud Music Player: Henoy ny mozika maimaimpoana avy amin'ny rahona amin'ny iPhone. Fantaro bebe kokoa momba ity mpilalao mozika ity amin'ny iPhone na iPad anao.
Huawei dia mandray anjara tanteraka amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-mamorona tanora
Ny orinasa sinoa dia mandray dingana goavambe ankoatry ny fivarotana vokatra elektronika ary ankehitriny aorian'ny ...
Azo alaina ao amin'ny Outlook izao ny maody maizina. Atoro anao ny fomba hampiasana azy
Miankina amin'ny fomba fampiasanao ny solosainanao, na amin'ny antoandro na amin'ny alina, miaraka amin'ny tarehin-jiro manodidina azy, dia azo inoana fa ny serivisy mailaka an'i Microsoft, Outlook, dia nahazo endrika vaovao ankafizin'ny mpampiasa maro: maody maizina. Atoro anao ny fomba hampiasana azy.
Azoko atao ve ny mihazakazaka Fortnite amin'ny PC-ko? Ireo no takiana farafahakeliny amin'ny lalao lamaody
Ireto ny fepetra farany ambany indrindra ahafahana mihazakazaka mahomby amin'ny PC rehetra.
Inona ny pasipaoro Telegram ary ahoana ny fampiasana azy
Telegram Passport, serivisy mifangaro ao anatin'ny Telegram mifototra amin'ny blockchain izay ahafahantsika mamantatra ny tenantsika amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny angona anay manokana.
Izahay dia mamakafaka ny Lenovo S5, ilay terminal mora vidy indrindra
Eo am-pelatanantsika ny Lenovo S5, terminal mora vidy izay handaniam-bola antsika hanavaka ny mpifaninana izay mitaky vidiny betsaka kokoa.
Ny AI vaovao an'i Google dia hanampy amin'ny fanitsiana ny lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana
Ity kinova Google AI vaovao ity izay havoaka ho an'ny Google Docs, hahafahan'ny mpampiasa manitsy ny ...
Hampanginin'i Firefox ny feon'ny horonan-tsary mandeha ho azy
Azo inoana fa mihoatra ny indray mandeha ianao dia nanana fampitahorana tsara rehefa hitanao fa nanomboka nisy feo misitery nivoaka avy tamin'ny mpandahateny nataonao, raha tsy misy Ny fanavaozana manaraka ny tranokala Mozilla Foundation Firefox dia tsy hilalao ny horonan-tsary amin'ny tranonkala vangiantsika izay nampihetsika ny feo.
Ahoana ny fomba hitsitsiana an'i Netflix amin'ny fizarana ny kaontinao amin'ny namana efatra
Amin'ny fizarana Netflix miaraka amin'ny namana efatra dia afaka mitahiry be indrindra sy mankafy ny atiny tsy misy ferana.
Ahoana ny fanovana andalana isaky ny tsanganana ao amin'ny Microsoft Excel
Rehefa manao karazana kisarisary (mifototra amin'ny angona miovaova), statistikan'ny mety, fanaraha-maso, fikarohana eo anelanelan'ireo takelaka samihafa, karohy Raha efa nieritreritra foana ianao raha afaka manova andalana ho an'ny tsanganana ao anaty takelaka dia eny ny valiny ary asehonay anao ny fomba ataovy izany.
Izahay dia mamakafaka ny Homtom S7, finday avo lenta mora vidy miaraka amina frame vitsivitsy
Manana ny Homtom S7 eo am-pelatananay izahay ary tianay ny handinika izany mba hahitanareo amin'ny tenanareo izay mety ho zakan'ny telefaona amin'ny vidiny mirary.
Ekipa mpahay siansa iray manome toky fa ny dia voalohany dia amin'ity taonjato ity
Ekipa mpahay siansa notarihin'i Ronald Mallet no nilaza teoria iray hamela ny olombelona handeha mandritra ny taonjato maro.
Ahoana ny fanovana ny toerana misy ny fampidinana fampidinana ao amin'ny Google Chrome
Tao anatin'izay taona lasa izay, Google Chrome no nanjary mpizaha tena be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, eo amin'ny sehatra Android (apetraka amin'ny fomba iray) Ny fanovana ny toerana misy ny fampidinana fampirimana ao amin'ny kopianay Google Chrome dia dingana iray tena tsotra izay zaranay amin'ny Ity lahatsoratra ity.
Izahay dia mamakafaka ny fakantsary Insta360 Nano S, fakantsary 360º izay afaka miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra
Eo am-pelatanantsika ny Insta 360 Nano S, ilay fakan-tsary 360 most be mpampiasa indrindra mifanentana tanteraka amin'ny iPhone-nao, mahita azy miaraka aminay.
Ny Apple HomePod dia hanana fanohanana amin'ny antso ary hiteny espaniola ato ho ato
HomePod dia manolotra fanampiana ho an'ny antso. Fantaro bebe kokoa momba ny zavatra ho avy tsy ho ela amin'ny mpandahateny Apple amin'ity fararano ity.
Farany! Afaka mametraka ny extension Chrome ao amin'ny Opera izahay izao
Ampidiro ao amin'ny Opera Browser ireo extension Google Chrome tianao indrindra mba hahatonga ny mpitety tranonkala ho feno kokoa sy hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa anao.
Ahoana ny fomba hampitomboana ireo kisary taskbar amin'ny Windows 10
Rehefa nivoatra ny kinova an'ny Windows dia nandray andraikitra lehibe kokoa ny barazanana. Miaraka amin'ny Windows 10, tsy manana fotsiny izahay Raha kely loatra ho anao ny sary masina eo amin'ny bara fizarana, eto ambany izahay dia mampiseho aminao ny fomba ahafahantsika manamboatra azy ireo haingana kokoa.
Google dia manambara hetsika ho an'ny mpamorona vaovao amin'ny Novambra
Amin'ity tranga ity, ny orinasa izay manana ny foibeny ao Mountain View, California, dia manambara hetsika vaovao mifantoka amin'ny ...
Hanakana ny zaza latsaky ny 13 taona ny Facebook
Hanakana ny kaontin'ny ankizy latsaky ny 13 taona ny Facebook. Fantaro misimisy kokoa ny fepetra vaovao amin'ny tambajotra sosialy hiadiana amin'ireo kaonty ireo
Ahoana ny fomba hanovana haingana ny kaontin'ny mpampiasa Windows 10
Rehefa ampiasain'ny olona maro ny solosaina, na any am-piasana na any an-trano, dia ampirisihina hatrany ny olona tsirairay mampiasa azy, Isaky ny kinova vaovao amin'ny Windows, dia manome fomba vaovao hifanakalozana eo amin'ireo kaonty mpampiasa samihafa noforoninay. ao amin'ny ekipa.
Ahoana ny fandrefesana ny kalitaon'ny Internet amin'ny FAST, ny metatra hafainganam-pandeha tsara indrindra
Tamin'ny fahatongavan'i ADSL, ny kalitaon'ny fifandraisana Internet ao an-tranonay dia nitaky fiakarana lehibe, na amin'ny hafainganana na amin'ny kalitao, na amin'ny fomba fandrefesana ny hafainganan'ny fifandraisan'ny Internet amin'ny fitsapana hafainganam-pandeha FAST, ny haingana indrindra, azo itokisana ary feno.
Raketo ho an'i Amazon miaraka amina vokatra maherin'ny 100 tapitrisa namidy nandritra ny andro lehibe
Na dia ho an'ny mpampiasa maro aza, ny Prime Day dia tsy inona na inona soratana an-trano momba ny tolotra natombok'i ...
Ahoana ny fomba hanamboarana ny any aoriana rehefa mamaly fanontaniana Instagram
Tianay aseho anao ny fomba ahafahanao manova ny ambadika ao amin'ny Instagram amin'ny famaliana ireo fanontaniana mba hahafahanao manome endrika manokana azy ireo.
Nampiato ny kaonty an-tapitrisany ny Twitter hatramin'ny faran'ny 2017
Nakaton'ny Twitter ny kaonty 57 tapitrisa tamin'ny faran'ny 2017. Jereo bebe kokoa ny kaonty an-tapitrisany izay hakaton'ny tambajotra sosialy.
Alemà dia nanamarika zava-dehibe iray hafa tamin'ny hazakaza-jaza nokleary
Ekipa mpikaroka alemanina iray no nahavita nanatsara ny stellarator azy ireo, nahatratra ny maripana mbola tsy tratra tamin'ny andrana mitovy amin'izany.
Fifanarahana amin'ny andro voalohany amin'ny 17 Jolay 2018
Omaly dia nanomboka tamin'ny 12 ora antoandro ny Andro Prime Amazon, andro izay maharitra hatramin'ny ...
Izahay dia mamakafaka ny mikrô HD Studio Signa avy ao amin'ny Trust, ilay mpiara-mitory aminao tonga lafatra
Matokia HD Studio Signa, ny namanao tonga lafatra amin'ny stream, gameplays ary podcast miaraka amina endri-pijanonan'ny fo.
Izahay dia mamakafaka ilay mpanadio volo robot iLife V8S, iray amin'ireo feno indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra
iLife V8S dia robot manadio manan-tsaina afaka manosotra, manasa sy manala amin'ny fitaovana tokana, ireo no mampiavaka azy sy ny fahaizany.
Fanitsakitsahana fiarovana matotra no nampiharihary ny angon-tsoratry ny mpanjifa Telefónica
Telefaona: ny fanitsakitsahana ny fiarovana dia mampiharihary ny angona manokana an'ny mpanjifa. Fantaro misimisy kokoa momba io tsy fahombiazana lehibe io izay nisy fiantraikany tamin'ny mpandraharaha anio alina.
Ny fivarotana voalohany an'i Xiaomi ao Zaragoza dia manemotra ny fisokafany
Mitohy ny fisokafan'ny fivarotana vaovao an'ny orinasa Xiaomi eto amintsika ary amin'ity tranga ity dia ...
Ahoana ny fomba fampidinana mozika MP3 sy FLAC avy amin'i Deezer
Ianaro ny fomba fampidinana hira avo lenta amin'ny endrika 3Kbps MP320 sy FLAC amin'ny solosainao maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Deezer.
Sonos mpandahateny izao dia mifanaraka amin'ny AirPlay 2
Apple dia nanolotra ny taranaka faharoa an'ny AirPlay, AirPlay 2, tao anatin'ny rafitry ny Conference Conference tamin'ny taona lasa, ...
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Windows 10 maimaim-poana
Raha mbola tsy nanapa-kevitra ny hanandrana ny Windows 10 ianao satria tsy manana fahazoan-dàlana manan-kery, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba ahafahanao mametraka azy io maimaim-poana sy ara-dalàna.
Ny fiovana ao amin'ny Twitter dia mety hampihena ny isan'ireo mpanaraka anao
Miato ny fanisana kaonty voasakana amin'ny Twitter ny Twitter. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao nampidirina tao amin'ny tambajotra sosialy.
Ahoana ny fametrahana ireo sticker amin'ny fanontaniana amin'ny Instagram Stories mora foana
Ankehitriny ianao dia afaka mampiditra sticker izay mamela ny mpijery ny tantaranao hanontany anao mora foana, hasehonay anao ny fomba.
Fitokonana any Amazon ho an'ny andro lehibe: tsy nisy fifanarahana nifanaovana tamin'ireo sendika
Ireo mpiasa Amazon ao amin'ny trano fanatobiana entana ao San Fernando de Henares dia niantso fitokonana izay mifanindry amin'ny fankalazana ny andro lehibe.
Apple dia mametraka 1Password ho an'ny mpiasa orinasa rehetra
Apple mividy lisansa 1Password ho an'ny mpiasa rehetra ao aminy. Hijery misimisy kokoa momba an'ity hetsika ity izay hampiasan'izy ireo ny rindranasa fitantanana teny miafina.
Inona no fomba fampandrenesana YouTube amin'ny Android sy ny fomba hampiasana azy
Ankehitriny YouTube for Android dia nampiditra ny maody fampiatoana azy manokana, koa asehonay anao hoe inona izany ary ahoana ny fomba hampiasana azy.
Ny SPC dia manavao ny seha-telefaona tsy misy tariby sy mpandahateny mandrakotra ny filàna rehetra isan'andro
Ireo tovolahy avy ao amin'ny SPC dia mampiseho ny vaovaon-dohan-dohany sy mpandahateny tsy misy tariby mifantoka amin'ny famelana antsika hivezivezy amin'ny feo.
Ahoana ny fomba hanovana sary ho PDF amin'ny Windows 10
Ny fanovana sary amin'ny rakitra PDF dia dingana iray tena tsotra izay afaka segondra vitsy. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy.
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia tonga amin'ny famolavolana fanafody vaovao
Vondron'ireo manam-pahaizana avy ao amin'ny MIT dia nahavita namorona sehatra faharanitan-tsaina artifisialy afaka mamorona fanafody vaovao.
Xiaomi dia mivoaka ampahibemaso androany miaraka amin'ny sandan'ny 46.000 tapitrisa euro
Kely sisa tavela ho hitantsika ity orinasa sinoa goavambe ity izay mitarika ny mpampiasa rehetra ho lava ...
Drake dia namoaka fanavaozana ny rakikirany Scorpion
Drake dia namoaka fanavaozana ny rakikirany Scorpion. Fantaro misimisy kokoa ny fanovana natao tamin'ny kapila tsy nisy fampandrenesana mialoha.
ZTE dia mamindra famantarana mba hiasa any Etazonia
Raha jerena ny zava-nitranga tany Etazonia sy orinasa sinoa dia te hanohy hiasa ao amin'ny ...
Fanadihadiana Smartdrone BT, drone paosy lehibe
Anio dia manolotra anao izahay minidrone izay efa nosedraina nandritra ny andro maromaro ary nahatonga tsiro tsara ho anay ...
Kidy: ny milina fikarohana azo antoka ho an'ny ankizy
Kidy: ny milina fikarohana azo antoka natao ho an'ny ankizy. Fantaro bebe kokoa momba ity motera fikarohana ity izay manivana atiny tsy mety.
Ahoana ny fomba hanendrena hitsin-dàlan'ny keyboard amin'ny Clippings ao amin'ny Windows 10
Hasehonay aminao ny fomba ahafahanao manendry hitsin-dàlana tsotra ho an'ny fampiharana Snipping ao Windows 10.
Ahoana no ahafantarana izay rindranasa afaka miditra amin'ny kaonty Gmail-nay
Nanjary be loatra ny olana momba ny fiainana manokana. Mampalahelo fa manomboka reraka ireo olana rehetra ireo ...
Ireo mpampiasa Spotify dia mahazo famerenam-bola amin'ny dokambarotra Drake tsy tapaka
Ireo mpampiasa Spotify dia mahazo famerenam-bola amin'ny alàlan'ny fanaovana doka ny rakikira Drake. Fantaro bebe kokoa momba ireo fihenam-bidy ireo amin'ny serivisy streaming.
Ny fomba hanamboarana ny mpitantana irery dia afaka manoratra amin'ny vondrona WhatsApp
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mamorona na manamboatra ireto vondrona ireto izay ny mpitantana irery no afaka manoratra mba hahatonga ny WhatsApp ho toerana tsara kokoa
Tesla dia mahatratra ny lasibatra 5.000 3 Model XNUMX isan-kerinandro
Tesla dia nahatratra ny tanjona hamokatra modely 5.000 3 3 ao anatin'ny herinandro. Rehefa tapitra ny volana maromaro dia nahatratra ny lasibatra famokarana Model XNUMX ihany i Tesla.
Ahoana ny fomba hanaovana Windows 10 haingana kokoa
Hatramin'ny nanombohan'ny Windows 10 telo taona lasa izay, mpampiasa maro no nandray haingana ny farany ...
Mitadiava planeta vaovao roa misy toetra mitovy amin'ny Tany
Vondron'ireo astronoma fanta-daza no nahavita nahita planeta vaovao roa teny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny fahafaha-mitantana fiainana eo ambonin'izy ireo.
Hanatrika ny tontolon'ny Lalao Barcelona amin'ity taona ity ny Akira Yamaoka Japoney
Azo antoka fa maro amin'ireo nanatrika no tsy mahalala ity Japoney angano mifandraika mivantana amin'ny lalao video ity, ka hiditra ...
Ahoana ny fomba fitehirizana angona amin'ny alàlan'ny Spotify Lite, ilay tsimbadika Spotify
Spotify Lite dia tonga ao Anadroid, asehonay anao ny fomba ahafahanao mitahiry angona miaraka amin'ireo endriny ary manao ny ankamaroan'ny mozika amin'ilay kinova "lite".
Gadget tsara indrindra hitety ity fahavaratra ity
Tonga ny hafanana ka izahay dia mitondra amboara kely ho anao mba hitsangatsangana amin'ity fahavaratra ity amin'ny fomba mety indrindra.
Huawei Y5: 2018, endri-javatra sy vidin'ny fiditra fidirana vaovao an'i Huawei
Ny terminal fampidiran-dresaka izay alohan'i Huawei amin'ity taona ity, ny Huawei Y5, dia efa misy any Espana amin'ny vidiny 119 euro.
Ahoana ny fomba hanampiana mozika amin'ny tantara Instagram
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao manampy mozika mora amin'ny Instagram Story amin'ny alàlan'ity fitaovana vaovao ity.
Glass Curve Elite, ny fomba fametrahana ny vera mora tezitra indrindra amin'ny famantaranandronao
Hampianarinay anao ny fomba fametrahana vera marokoroko amin'ny findainao, ary ambonin'izany rehetra inona ny toetran'ity Glass Curve Elite ity.
RAMpage, bibikely manakiana izay misy fiatraikany amin'ny Android vita rehetra aorian'ny 2012
Vondronà mpikaroka no namoaka ilay fantatra amin'ny hoe RAMpage, fitrandrahana afaka mampiasa ny fahalemena izay misy fiatraikany amin'ny fitaovana Andorid.
Vaovao avy amin'ny HBO sy Movistar + ho an'ny Jolay 2018
Na eo aza ny fahitana fa efa eo amintsika ny fahavaratra, ary mihena ny fanjifana fahitalavitra, ny serivisy VOD lehibe dia manohy manitatra ny katalaoginy.
Tsy ho ela i Granada dia hanana Mi Store ofisialy voalohany, voamarina
Taorian'ny tsaho sy tsipiriany momba ny toerana mety hisy fivarotana Xiaomi hafa, nanamafy ny orinasa sinoa ...
Ireo mpilalao Fortnite dia mandany $ 80 eo ho eo amin'ny fividianana lalao
Ny mpilalao dia mandany $ 80 eo ho eo amin'ny fividianana Fortnite. Fantaro bebe kokoa momba ny vola miditra amin'ny Lalao Epic noho ity lalao ity.
Natomboka tamina firenena maro tamin'ny fomba ofisialy ny Instagram Lite
Eo antenatenan'ny fahavaratra isika ary mitombo na mihasarotra aza ny fanjifana angon-drakitra arakaraka ny ...
Notsapainay ny stick an'ny Alien SPC, avadiho ho fahita lavitra ny fahitalavitrao
Misaotra ny SPC's Alien Stick, azontsika atao ny mamadika haingana ny fahitalaviantsika ho Smart TV amin'ny 50 euro fotsiny.
Ny LG V40 dia hanana fakan-tsary dimy
Ho tonga ny LG V40 miaraka amin'ny fakantsary dimy amin'ny fitambarany. Fantaro bebe kokoa momba ny avo lenta vaovao avy amin'ny LG izay mampanantena fa izy no tsara indrindra amin'ny lafiny sary.
Ahoana ny fomba fihainoana ireo audios WhatsApp manokana amin'ny alàlan'ny headset
Lazainay aminao ny tetika iray ahafahanao mihaino ireo Audios WhatsApp manokana, amin'ny alàlan'ny sofin'ny antso.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fampandrenesana amin'ny IGTV vaovao ao amin'ny Instagram
Raha reraka ianao mandray fampandrenesana amin'ny finday avo lenta isaky ny mampakatra horonantsary vaovao amin'ny sehatry ny IGTV Instagram dia hasehonay aminao ny fomba hialana amin'izany.
Apple hanamboarana solosaina finday misy kitendry lolo diso
Apple dia hanamboatra Macbooks amin'ny kitapo lolo malemy maimaimpoana. Fantaro bebe kokoa momba ny programa fanamboarana solosaina amerikana ho an'ny solosaina finday
Nametra-pialana ny CEO Intel izay nifandray tamina mpiasa iray
Toa nandao ny birao i Brian Krzanich, CEO an'ny Intel taorian'ny nanambarana azy ampahibemaso fa nifandray tamina mpiasa ...
Ahoana ny fametrahana ny iOS 12 amin'ny iPhone na iPad izao fa efa misy ampahibemaso
Telo herinandro taorian'ny nanombohana ny beta developer voalohany an'ny iOS 12, dia nataon'i Apple ho an'ny mpampiasa fotsiny ny beta ho an'ny daholobe voalohany an'ny iOS 12.
Ahoana ny fomba hampiasana sy hamoronana fantsona IGTV, ny fahitalavitra Instagram vaovao
Hasehonay aminao ny fomba ahafahanao mampihetsika sy mamorona fantsona ao amin'ny IGTV, ilay fahitalavitra Instagram vaovao.
Wacom dia manolotra ireo takelaka vaovao hitrandrahana ny lafiny famoronana indrindra
Wacom dia mampahafantatra anay ny Cintiq Pro 24-inch tsy mampino sy mahery ho an'ny mpamorona matihanina, ary ny Wacom Intuos ho an'ny karazana mpampiasa rehetra.
Google Home Mini, izahay dia mamakafaka ilay mpanampy virtoaly mora vidy indrindra taorian'ny nahatongavany tany Espana
Izahay dia nisedra ny Google Home Mini ary eto dia avelanay ny hevitray, na dia hatramin'ny voalohany aza dia hilaza aminao izahay fa diso fanantenana lehibe izahay.
Rosiana (ovay) Ity dia iray amin'ireo teny voadika indrindra eto an-tany
Ary ity fanontaniana ity dia mamela antsika hanana fampahalalana tena lehibe iray hafa ho antsika izay mampiasa fampiharana fandikanteny na fitaovana ao ...
Bose Sleepbuds: Fandraisana an-tariby manafoana tabataba mba hatoriana tsara kokoa
Bose Sleepbuds: ny headphones mba hatoriana tsara kokoa. Fantaro bebe kokoa momba ny headphones voalohany an'ny marika mba hisorohana ny tabataba rehefa matory ianao.
Tsy i Tesla sy i Apple ihany no mieritreritra ny planeta. SEAT dia manana panneaux 53.000 hisambotra ny masoandro
Rehefa miresaka angovo madio isika dia tonga ao an-tsaina ireo orinasa amerikana Tesla na Apple, ankoatry ny maro hafa ...
Araraoty ny tombony azo avy amin'ny Netflix amin'ireo fanitarana ho an'ny Chrome ireo
Raha manana PC mifandray amin'ny solosainao ianao ary te hahazo tombony betsaka amin'ny kaontinao Netflix dia ireto ny fanitarana tsara indrindra ho an'i Chrome.
Holidu dia mandefa ny App Instant azy manokana ho an'ny Android
Holidu dia nanambara ny fanombohana ny Instant App ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny iray amin'ireo fampiharana Instant voalohany eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Ny Google Home sy ny Google Home Mini dia efa misy ao Espana
Ireo mpandahateny marani-tsaina an'i Google, Home sy Home Mini, dia efa misy ao Espana, ho an'ny 159 sy 59 euro.
Nvidia dia afaka milalao horonantsary amin'ny 'Slow Motion' ankehitriny
Nvidia dia maneho amin'ny fomba ofisialy ny besinimaro ny faharanitan-tsaina artifisialy vaovao afaka milalao karazana video amin'ny Slow Motion.
YouTube Music sy YouTube Premium misy any Espana izao
Ny serivisy fandefasana mozika nandrasana hatry ny ela an'i Google dia efa misy any Espana izao hijoroana amin'ny Apple Music sy Spotify
Nolavina tamin'ny fomba ofisialy ny tsaho momba ny fahatongavan'ireo lalao tao amin'ny Netflix
Ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny tsaho momba ny fahafahan'ny Netflix manampy lalao eo amin'ny sehatra anaovany ny hamitana ny fangatahana ...
Tsy mamela anao hamandrika Uber amin'ny fampiharana intsony ny Google Maps
Tsy afaka mamandrika ny Uber intsony amin'ny fampiharana Google Maps ianao. Ny fampiharana Google dia manala ny fahafahan'ny famandrihana lalana.
Android emulator Andy dia mety mametraka rindrambaiko fitrandrahana cryptocurrency
Android emulator Andy dia mametraka rindrambaiko cryptocurrency amin'ny solo-sainanao rehetra ametrahana azy, na dia nolavin'ny mpandraharaha aza izany
Energy Tablet Pro 4, mamakafaka an'ity takelaka ity izahay miaraka amin'ny efijery Full HD sy ny endrika panoramic
Hodinihintsika ny Energy Tablet Pro 4, fanontana farany ny tsara indrindra amin'ny takelaka ao amin'ny ekipa Energy Sistem miaraka amin'ny efijery Full HD sy Xtreme Sound,
Mahazoa ny iray amin'ny Essentes Smart Force Rowenta izay omentsika amin'ity herinandro ity!
Handeha hamaky ny Smart Force Essentials roa izahay, ny fantsom-panafody robot Rowenta ho an'ny karazana gorodona rehetra izay nohaninay teto amin'ity trano ity.
CUCA, bisikileta elektrika afaka mitondra mpandeha roa
CUCA dia bisikileta elektrika manana halavirana hatramin'ny 40 kilometatra ary manome ny mety hitaterana mpandeha roa
Ny Nintendo Switch dia hahafahanao mankafy ny Netflix sy YouTube tsy ho ela
Araka ny fivoahana farany farany, na Netflix na YouTube dia mety ho tonga amin'ny Nintendo Switch vetivety.
Kapersky eo amin'ny sain'ny Vondrona Eropeana
Tsy manana fotoana mahafinaritra ny rindrambaiko fiarovana Kapersky ary maniry ny hanala izany amin'ny ...
Chrome dia tsy hamela ny fametrahana extensions avy any ivelan'ny Chrome Web Store
Ny fanitarana dia iray amin'ireo zavatra noforonina tsara indrindra azon'ny mpitety tranonkala tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia ry zalahy aza ...
Nofaranana tamin'ny resa-be i Atoa Granbomba tamin'ny raharaha Caranchoa
Taorian'ny baikon'ny mpitsara dia nifarana ny fifandirana, dia navotsotra tamin'ny raharaha "Caranchoa" Andriamatoa Granbomba tamin'ny raharaha mahefa.
Apple dia nilaza fa namorona asa 1,76 tapitrisa any Eropa. Marina izany?
Apple dia nilaza fa namorona asa 1,76 tapitrisa any Eropa. Fantaro bebe kokoa momba ny tatitra momba ny asa ataon'ny orinasa Cupertino.
PlayStation 5 dia mety ho tonga amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny AMD manokana an'ny Sony
Raha ny tsiliantsofina re dia toa hoe hiara-hiasa amin'ny AMD i Sony amin'ny famolavolana fitaovana manokana izay hanome fiainana ny PlayStation vaovao.
Ity no fanavaozana vaovao an'ny Microsoft Office 365
Nahazo iray amin'ireo fanavaozana tena ilaina indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy izahay ho an'ny Office 365, miaraka amin'ny fanatsarana ny famolavolana sy ny fitaovana ampiasaina.
Etazonia tamin'ny fampandrenesana taorian'ny fanambarana fa hanangana ny HAARP azy manokana i Shina
Na eo aza ny teoria fikomiana lehibe, vao avy nanambara ny fananganana radara HAARP i Shina, vaovao izay mampiahiahy be any Etazonia.
Lenovo ThinkPad P52, biby manana 128 GB RAM
Lenovo Thinkpad P52, solosaina finday iray izay te-hanome antsika fahafaha-mampiseho zavatra tsy misy hafa ary tsy latsaky ny 128 GB RAM.
Ny rafitra fiarovana an-trano an'i Ring dia eo an-tsena amin'ny vidiny $ 199
Hainay fa amin'ny fahefatry ny volana Jolay ny rafitra fiarovana Ring dia hamely ny tsenan'i Amerika Avaratra amin'ny $ 199.
Apple manamboatra lesoka fiarovana macOS 11 taona
Vao nanambara i Apple fa namaha olana ara-piarovana matotra izy ireo izay efa tao amin'ny macOS nandritra ny 11 taona mahery.
Tesla dia hiezaka ny hahazo tombony amin'ny famoahana ny 9% ny mpiasa ao aminy
Rehefa afaka volana maromaro niandrasana, Elon Musk dia nanatanteraka ny drafitra fanitsiana nataony ho an'i Tesla tamin'ny alàlan'ny famoahana ny 9% ny mpiasa.
Ny vaovao PlayStation rehetra amin'ny E3 2018
Ireo no vaovao rehetra avy amin'ny Sony ho an'ny PlayStation izay natolotry ny multinational japoney tao amin'ny E3 2018.
Ny Diviziona 2 miaraka amina fanafihana mpilalao hatramin'ny 8, ity no lalao aseho ao amin'ny E3
Tsy misy isalasalana fa ity E3 ity no mahomby indrindra amin'ny resaka fanambarana vaovao sy vaovao mifandraika amin'ny ...
Xiaomi Redmi Note 5, mamakafaka ny terminal izay mikasa ny hamaky ny tsena izahay
Miaraka aminay ny Xiaomi Redmi Note 5 ary izahay dia hanao famakafakana amin'ny fahaiza-manao sy fitsapana fakan-tsary mba hahitanao izay hainy.
Famerenana ny zavakanto elektronika E3 2018
Ny kaonferansa manan-danja voalohany amin'ny E3 2018 dia nilalao zava-kanto Elektronika ary toerana ahitan'ny vaovao ny tsy fisiany.
Porsche Taycan, ity no anaran'ny fiara elektrika 100% voalohany an'ny orinasa
Ny Porsche Mission E dia efa manana anarana ara-barotra. Ity dia: Porsche Taycan, fiara elektrika 100% voalohany an'ny orinasa Alemanina
Nanome angon-drakitra ho an'ny orinasa sasany ny Facebook
Nanolotra angon-drakitra ho an'ny orinasa sasany ny Facebook. Fantaro bebe kokoa momba ny fifanarahana izay tsy maintsy nomen'ny tambajotra sosialy ity angona ity.
Hanjavona tanteraka ny Yahoo Messenger amin'ny volana ho avy, raha miasa izy izao
Ary azoko antoka fa maro tamin'ireo nanatrika no niditra an-tsehatra tamin'ity resaka angano ity izay ...
Ireto ny fitsipika etika izay hampiasain'i Google hampivelatra ny rafi-pitsikilony artifisialy
Google dia nanambara ny fampiharana andiam-pitsipika etika vaovao harahin'izy ireo rehefa hampivelatra ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Valve dia nilaza fa tsy hanivana lalao misy amin'ny Steam izy io
Valve dia namoaka fanambarana izay nanambarany fa ny sehatra gaming Steam dia hitsahatra tsy hanivana ireo lalao izay azo jerena eo amin'ny sehatra Steam
ZTE dia nanao fifanarahana tamin'i Etazonia hanohy ny asany
ZTE dia nahatratra fifanarahana hahafahana manohy miasa. Fantaro bebe kokoa momba ny fifanarahana izay efa nahitan'ny mpanamboatra sinoa an'i Etazonia afaka hamokatra indray.
Mikatsaka ny hanatsara ny rafitra mangatsiaka an'ireo ivon-angon-drakitra Microsoft amin'ny alentika ao ambanin'ny ranomasina izy ireo
Microsoft, taorian'ny dingana voalohany nahomby tamin'ny fitsapana, dia nanambara ny fanombohana ny dingana faharoa amin'ny Project Natick, izay tsy latsaky ny 864 ireo mpitrandraka no rendrika tao ambanin'ny ranomasina.
Tesla dia mampiseho ny sary ofisialy voalohany an'ny Model Y
Tesla dia namoaka ny sary ofisialy voalohany an'ny Model Y. Fantaro bebe kokoa momba ny fiara vaovao an'ny marika, izay ho SUV kely izay tokony havoaka amin'ity taona ity.
Norman: Ny faharanitan-tsaina artifisialy voalohany mieritreritra toy ny psychopath
Norman: Faharanitan-tsaina artifisialy izay mieritreritra toy ny psychopath. Fantaro misimisy kokoa momba an'ity tsikombakomba artifisialy novokarin'ny mpikaroka ao amin'ny MIT ity.
Mozika sy boky maimaim-poana miaraka amin'ny famandrihana Amazon Prime
Ny e-varotra goavambe dia nanitatra ny isan'ny serivisy natolony antsika tamin'ny alàlan'ny sarany Amazon Prime.
Voamarina: Hanangana an'i Echo sy Alexa any Espana i Amazon amin'ity taona ity
Amazon dia handefa ireo mpandahateny Echo sy Alexa any Espana amin'ity taona ity. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ireo mpandahateny vaovao ao Espana izay ho avy tsy ho ela eo amin'ny tsena.
Izahay dia nanandrana ny Smart Force Essential, ny fantsom-pandrefesana mahazatra an'ny Rowenta
Rowenta dia nanolotra namana tsara indrindra, ny Smart Force Essential, mpanadio banga robot miaraka amin'ny zavatra rehetra ilaintsika hanombohana eo amin'ny tontolon'ny fanadiovan-tena.
macOS Mojave no ho andiany farany an'ny macOS mifanaraka amin'ny fampiharana 32-bit
macOS Mojave, no ho endriny farany an'ny macOS izay hifanaraka amin'ireo rindranasa natao ho an'ny 32 bit, fampiharana izay tsy maintsy havaozina raha te hijanona ho safidy ho an'ireo mpampiasa ao amin'ny Mac App Store izy ireo.
Maimaimpoana ve ny findaiko? Ampianarinay ianao hahalala haingana raha maimaimpoana ny finday avo lenta, na mifamatotra amin'ny mpandraharaha izy io, singa iray manapa-kevitra izany rehefa afaka mampiasa azy io amin'ny mpandraharaha hafa na raha te hivarotra azy izahay.
Ny mpanjifa Tesla dia afaka manandrana ny autopilot vaovao maimaim-poana
Ny mpanjifa Tesla dia afaka manandrana ny autopilot vaovao maimaim-poana. Fantaro bebe kokoa ny fanapahan-kevitry ny orinasa hamela ny mpanjifa hanandrana maimaim-poana ireo fanatsarana ireo.
Nohamafisin'i Sharp ny fividianana fizarana PC an'ny Toshiba
Sharp dia manao ny ofisialy amin'ny fividianana ny fizarana solosaina an'i Toshiba. Hijery misimisy kokoa momba ity hetsika fiverenan'i Sharp ity amin'ny sehatry ny solosaina.
Fahaleovan-tena bebe kokoa ho an'ny karazana solosaina finday rehetra noho ny Snapdragon 850
Qualcomm dia nanambara ny fahatongavany teo amin'ny tsenan'ny Snapdragon 850 vaovao, processeur iray izay mivoatra avy amin'ny Snapdragon 845 hanolotra fifandraisana tsara kokoa, fampisehoana bebe kokoa ary ambonin'izany rehetra izany dia mizaka tena manokana.
HomeKit sy ny app Home, tonga amin'ny Mac noho ny macOS Mojave
HomeKit mifanentana amin'ny Mac dia tonga noho ny kinova vaovao natolotry ny tovolahy avy ...
Tesla dia namerina mihoatra ny 20% ny famandrihana ho an'ny Model 3
Tesla dia namerina ny 23% amin'ny famandrihana maodely 3. Fantaro bebe kokoa momba ny fanafoanana ny fiara noho ny olana marobe amin'ny famokarana azy.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny macOS Mojave
Eto izahay dia mampiseho aminao ny vaovao rehetra izay ho avy amin'ny tanan'ny macOS manaraka, vita batemy ho Mojave.
Ny zava-baovao rehetra ao amin'ny iOS 12 natolotr'i Apple nandritra ny WWDC18
Izahay dia manome famintinana anao amin'ny vaovao rehetra natolotr'i Apple nandritra ny WWDC18 ao amin'ny iOS 12 ho rafitra fampandrenesana vaovao sy Augmented Reality.
Hitsahatra tsy hiara-miasa amin'ny Pentagon momba ny fampandrosoana rindrambaiko ady i Google
Tabataba goavana izay voalamina ao anaty ao amin'ny Google taorian'ny nahalalàny fa ny orinasa dia niara-niasa tamin'ny famolavolana sehatra faharanitan-tsaina tsy misy latsaky ny Pentagon.
Galaxy A9 Star: Samsung ve nanao kopia ny ampahany amin'ny iPhone X?
Sivanina ny famolavolana ny Samsung Galaxy A9 Star vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny orinasa koreana izay lazain'izy ireo fa nahazo aingam-panahy tamin'ny famolavolana ny iPhone X.
Microsoft dia nividy GitHub, fifanarahana izay hambara anio
Nanambara ny fividianana ofisialin'ny GitHub i Microsoft. Fantaro misimisy kokoa momba an'io asa io izay nanambaran'ny orinasa amerikana ny fividianana ny pejy fitahirizana kaody.
Araho mivantana # WWDC2018 sy ny fampisehoana ny iOS 12 miaraka amin'i Actualidad Gadget
Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fanarahana ity WWDC 2018 mivantana ity ary ampahafantaro amin'ny Espaniôla tanteraka dia efa manana ny vahaolana ianao. Mijanona miaraka aminay hankafy ny fandrakofana mivantana ny fampisehoana iOS 12 ary angamba ny iPhone X SE.
Eo am-pelatanantsika dFlow Soul, ilay miteny espaniola tonga nijanona
Eo am-pelatanantsika ny dFlow Soul, mpandahateny 360º izay manolotra fiasa tsara sy kilasy kilasy voalohany amin'ny vidiny lafo dia lafo, mijanona amin'ny famakafanay.
Hesorin'ny Facebook ilay faritra malaza
Hesorin'ny Facebook ity fizarana fironana ity amin'ity herinandro ity. Ho avy ny faran'ny fizarana fironana amin'ny tambajotra sosialy, izay efa miasa amin'ny vahaolana vaovao.
Qualcomm dia te-hametaka ny lohany ao anaty solosaina birao amin'ny Snapdragon 1000
Qualcomm dia te-hanomboka ho mpisolo toerana ny Intel amin'ny birao fihinanana / herinaratra ambany amin'ny Snapdragon 1000
Tian'i Shina ny mpikaroka any ivelany hanampy amin'ny famolavolana ny tobin'ny habakabaka ho avy
Mifanohitra amin'izay zava-nitranga hatrizay, nanapa-kevitra ny hanokatra varavarana ho an'ny mpikaroka eran'izao tontolo izao i Shina mba hiara-miasa amin'ny famolavolana ny habakabaka iraisam-pirenena vaovao.
Nihemotra tamin'ny politika momba ny atiny fankahalany ny Spotify
Spotify manitsy ny politikany votoatin'ny fankahalany. Fantaro misimisy kokoa ny fanapahan-kevitry ny orinasa hihemotra taorian'ny resabe tato amin'ity herinandro ity.
Nijanona ny fivarotana Canon ny fakantsary analogany farany
Canon EOS-1V: Tsy amidy intsony ny fakantsary analog. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatsiarovana ny fakantsary analog farany avy amin'ny marika Japoney.
Ny fanararaotana iray dia hita tao amin'ny rindrambaiko Steam desktop izay nisy nandritra ny 10 taona lasa
Noho ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana ny solosaina Tom Court, dia voavaha ny fahalemena iray lehibe eo amin'ny mpanjifa solosaina Steam, izay voavaha ihany, volana vitsivitsy lasa izay.
Ireto ny lalao PlayStation Plus sy Live With Gold maimaim-poana amin'ny Jona 2018
Ato ambany dia asehonay anao izay lalao maimaim-poana atolotry ny Sony sy Microsoft anay amin'ny alàlan'ny serivisy fisoratana anarana ho an'ny Xbox sy PlayStation
Fallout 76: Ilay Fallouth Vaovao Mampahafantatra an'i Bethesda
Fallout 76: Lalao vaovao tsy fantatra momba an'i Bethesda. Fantaro bebe kokoa momba ny tranofiara vaovao an'ny orinasa ho an'ny lalao, izay mampanantena fa tsy hitovy amin'ny sisa amin'ny andiany.
Microsoft dia mandefa tranokala vaovao azo antoka ho an'ny ankizy
MSN Kids: tranokalam-baovao Microsoft ho an'ny ankizy. Fantaro bebe kokoa momba ny fandefasana ity tranokala ity miaraka amin'ny vaovao sy atiny ho an'ny ankizy ihany.
Nanambara ny fahatongavan'i Hello to Spain i Nest, amin'ny volana ho avy
Ny lakolosim-baravarana fakan-tsary no filaminan'ny andro ary androany dia manana vaovao tsara isika ho an'ireo izay ...
Mijanona tsy mampiseho ny atin'ny hafatra i WhatsApp taorian'ny fanavaozana ny iPhone mankany amin'ny iOS 11.4
Ny fanavaozana farany ny iOS 11.4 ho an'ny iPhone, dia miteraka fifandonana amin'ireo fampandrenesana WhatsApp sy WhatsApp ajanony ny fampisehoana ny mpandefa sy ny atiny, na ny mpandefa ihany.
PUBG Corp. dia nitory ny Fortnite noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
Tsy misy isalasalana na dia ireo lalao aza dia voavonjy amin'ny fitoriana ary izany no mitranga amin'ny Pubg sy Fortnite. Samy…
Ny haavon'ny rà hita ao amin'ny Dark Souls Remastered
Hitan'izy ireo ny haavon'ny ra ao amin'ny Dark Souls Remastered ary izany dia mihazakazaka ao amin'ny GTA V. Jereo ity tantara mahaliana ity izay azo antoka fa hisarika ny sainao.
Xiaomi dia manomana fivarotana ofisialy vaovao any akaikin'ny Apple Store ao Puerta del Sol
Ary mbola miresaka momba Xiaomi ao amin'ny Actualidad Gadget ihany izahay aorian'ny fanadihadiana mahavariana an'ny Xiaomi Mi Mix 2S vaovao ...
Mampitandrina ny fisolokiana V-Bucks maimaim-poana ao amin'ny YouTube i Fortnite
Mampitandrina momba ny fisolokiana V-Bucks ao amin'ny YouTube i Fortnite. Fantaro bebe kokoa momba ireo fisolokiana ireo izay mitady hahazoana angona na vola amin'ireo mpampiasa amin'ny lalao Epic Games malaza.
Fanadihadiana momba ny Xiaomi Mi Mix 2S, bibidia Xiaomi hanandrana hanjaka amin'ny toerana avo
An-tanantsika ilay antsoina hoe High Killer Range amin'ity taona 2018 ity, ny Xiaomi Mi Mix 2S, telefaona iray izay misy fitaovana am-boalohany sy fampisehoana miavaka.
Nilaza i Microsoft fa tsy mila antivirus ny Windows 10
Rehefa avy nahita ny fanamafisana ny fitsapana AVTEST fa Windows Defender no vahaolana antivirus tsara indrindra eny an-tsena dia asehon'ny orinasa amin'ny alàlan'ny bilaoginy izany.
Niaiky i Sony fa efa akaiky ny faran'ny boriborintany PlayStation 4
Ny orinasa Japoney dia manamafy fa ny faran'ny tsingerin'ny PlayStation 4 eny an-tsena dia efa akaiky hitranga. Eo am-panomanana ny tany ho an'ny fahatongavan'ny console vaovao anao. Hahafantatra bebe kokoa momba ny drafitr'i Sony tsy ho ela isika.
Xtorm Freedom, fototra mavitrika Qi mahazatra hainganana haingana
Xtorm dia orinasa veteran amin'ny vokatra enti-miasa tsy misy tariby ary androany dia manana iray amin'ireo mpantsaka malaza indrindra eto an-tanantsika isika, ny Xtorm Freedom.
Google, Facebook ary maro hafa dia efa mety nandingana ny GDPR
Ireo orinasa toa an'i Google sy Facebook dia voapanga ho efa nandiso ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny angon-drakitra any Eropa, ary izany no antony angatahina amin'izy ireo handoa 7.000 tapitrisa amin'ireo mpampiasa.
Acer Swift 5, manadihady ny iray amin'ireo filokana tsara indrindra eto an-tsena izahay amin'ny fizakan-tena sy ny fahafaha-mitondra
Acer Swift 5, maodely matanjaka be na eo aza ny fahazavana sy ny fivezivezeny. Andao hofantarintsika akaiky kokoa izany, manolotra solosaina finday avo lenta anao izahay ambanin'ny arivo euro.
Tesla nametraka fitoriana amin'ny kilasy manohitra ny autopilot-ny
Tesla nametraka fitoriana amin'ny kilasy manohitra ny autopilot-ny. Hijery misimisy kokoa momba ny fametrahana ny orinasa nahitana olana tamin'ny Autopilot.
Omaly no andro farany tsy maintsy nanovanan'ny orinasa ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny angona ankapobeny (GDPR amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy)
Etazonia dia manadihady ny fanodikodinam-bola amin'ny Bitcoin. Fantaro bebe kokoa momba ity fanadihadiana ity izay mitady hahafantatra raha namboarina ny vidin'ny cryptocurrency.
Spotify dia mila mandoa 112 tapitrisa hampiasa mozika tsy misy fahazoan-dàlana. Fantaro bebe kokoa ny habetsaky ny vola tsy maintsy aloan'ny orinasa.
Mitady asa? Google mandefa ny motera fikarohana azy any Espana
Marina fa mora kokoa ny mahita asa ankehitriny noho ny fanarenana ara-toekarena ny firenena, saingy ao ...
Ny Vivo APEX, miaraka amin'ny efijery rehetra anoloana sy tsy misy notch, dia aseho amin'ny 12 Jona
Ny orinasa Aziatika Vivo, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fampisehoana ny Vivo APEX, ny terminal voalohany nahatratra ny tsena nefa tsy nisy karazana sisiny teo amin'ny efijery.
Uber hanokatra Advanced Technology Center any Paris
Uber dia miomana ny hanokatra Ivotoerana ho an'ny Advanced Technologies any Paris. Fantaro misimisy kokoa momba ny ivon-orinasa vaovao hamelaran'izy ireo taxi-be manidina.
Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 Edition, nosedrainay ireo kapila an-tsarimihetsika ho an'ireo tia ilay saga
Amin'ity indray mitoraka ity dia manana ny lohan'ny lalao Thrustmaster Y-300CPX Far Cruz Edition, headset mahazatra misy famolavolana sy feo tsara, mijanona miaraka aminay ary hahitanao ny fanadihadiana lalina nataony.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Instapaper, satria efa nijanona tsy niasa tany Eropa intsony izy io
Vantany vao nakatona ny serivisy hitahiry tranokala vakiana aorian'ny Instapaper, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny andiana safidy hafa tsy manan-kery.